Zazakely Teratany Fanahy Iniana Novonoina, Saingy Zara Raha Nahafantatra Ny Fisian’izany i Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2016 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Português, Español, Français, English
Kamera fitsikilovana mampiseho ny voarohirohy manatona ny reny sy ny zaza. Pikantsary
Ny tolakandron'ny 30 Desambra, nampinono ny zanany lahy 2 taona ny renim-pianakaviana Kaingang raha nipetraka teo amin'ny sisin-dalana ivelan'ny toby fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka tao an-tanànan'i Imbituba, fanjakan'i Santa Catarina, Brezila. Natory tao nandritra ny andro vitsivitsy niaraka tamin'ny vondron'olona teratany hafa izy mianaka, nandeha fiara iombonana nandritra ny adiny valo niala tao an-tanànan'i Chapecó hamonjy an'i Imbituba izy ireo mba hivarotra ny asa-tananan'izy ireo.
Ao Santa Catarina, fanjakana miorina ao atsimon'i Brezila, feno mpizaha-tany avy amin'ny fanjakana hafa sy firenena manodidina tahaka an'i Orogoay sy Arzantina ny tora-pasikany malaza rehefa faran'ny taona. Maro amin'ireo olona teratany no manararaotra ny firohotry ny vahiny mba hitady vola amin'ny alalan'ny fivarotana ny asa-kanton'izy ireo, noho izany, mahazatra ny mahita vondrona mijanona ao amin'ny toby fiantsonan'ny fiara iombonana mba hifanakaiky kokoa amin'ireo mety ho mpanjifa.
Nihazona ny zanany ilay tanora renim-pianakaviana maka aina miankina amin'ny rindrina raha nisy olona tsy fantatra nanatona azy ireo. Nampiseho ny sarin'ny kamera fitsikilovana fa nikasika ny tarehin'ilay zazakely ilay lehilahy alohan'ny nanapahany ny tendany tamin'ny antsy kely. Rehefa nandositra izy dia nitabataba nianjo vonjy ilay renim-pianakaviana, saingy tsy tana intsony avy eo ny ain'i Vitor Pinto 2 taona.
Tsy niseho tamin'ny lohatenim-baovao lehibe tao Brezila ity famonoana zazakely, maty teo am-pelatanan-dreniny tamin'ny andro mazava ity. Vitsy ny haino aman-jery nitatitra ny zava-nitranga. Araka ny nolazain'ilay mpanao gazety Eliane Brum, nanoratra tao amin'ny gazety espaniola El País hoe:
Raha ny zanako lahy, na ny zanak'ireo vehivavy fotsy saranga antonony hafa no novonoina tamin'izany toe-javatra izany, dia mety nipoitra tamin'ny lohatenim-baovao, mety misy ireo manampahaizana manadihady ny herisetra, mety misy ny tomany ary mety misy ny firaisankina. Ary angamba mety misy ny labozia sy voninkazo apetraka eo amin'ny tanin'ilay fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka, tahaka ireo napetraka ho an'ireo niharam-boina tamin’ny fampihorohoroana tao Paris. Saingy vazimba teratany i Victor. Zazakely, saingy teratany. Kely, saingy teratany. Lasibatra, saingy teratany. Novonoina, saingy teratany. Voantsindron’ antsy, saingy teratany. Izany “saingy” izany ilay mpamono olona miafina. Mpamono olona mitohy izany “saingy” izany.
Fiainana Inona No Zava-dehibe Kokoa?
Fanoharana ny tolona teo amin'ny olona teratany sy ny milisy nandritra ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany tao Brezila, sary avy amin'i Johann Moritz Rugendas. Azon'ny rehetra ampiasaina
Hatramin'ny naha-lasa “orinasa Eoropeana” an'i Amerika Latina – araka ny fiteny nahazatra an'ilay mpanao gazety Eduardo Galeano – anisan'ny mora vidy indrindra hatrany ao amin'ny kaontinanta ny fiainan'ny indizeny. Tsy zava-baovao izany. “Manan-tantara ny fanavakavahana manohitra ny olona teratany,” araka ny nolazain'ilay mpahay tantara Breziliana Waldir Rampinelli nandritra ny antsafa tamin'ny Radio Campeche taorian'ny famonoana an'i Vitor:
Raha vao mahaleo tena i [Brezila], tsy nisy na inona na inona niova ho an'ny olona vazimba teratany […] Mbola manjaka ankehitriny izany fitsarana an-tendrony mihatra amin'ny vahoaka indizeny izany. Tafahoatra ka na dia ity famonoana olona indizeny tao amin'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka tao Imbituba ity aza dia toa heloka tsy manan-danja kokoa noho ny famonoana zaza fotsy ao amin'ny fiantsonan'ny fiara iombonana ao Florianópolis [renivohi-pirenena].
Manamarika i Elaine Tavares, mpanao gazety monina ao Santa Catarina nitrangan'ny famonoana an'i Vitor fa rehefa tonga ao Amerika Latina ny mpizaha-tany Espaniola sy Portogey, nopetahana marika toy ny “tsy-olombelona, olom-pirenena kilasy faharoa, mpivadika sy tsy misy ilaina azy ny olona teratany “:
Nandritra ireo taonjato rehetra ireo, natsangana ny endrika ratsy momba ny vazimba teratany mba hanamarinana fotsiny ny fanafihana, sy ny hala-tany aman-karenan'izy ireo. Raisina toy ny zavatra manelingelina, fahatsiarovana mahasadaikatra tamin'ny fandripahana ny olona indizeny. Izany no mahatonga ny vahaolana tsara indrindra miafara amin'ny fanibohana azy ireo ao anaty “tahiry,” lavitry ny mason'ny olon-kafa. Saingy raha manapa-kevitra hivoaka izy ireo ary hifampitakisina amin'ny fiainan'ny tontolon'ny fotsy hoditra, dia mivadika ratsy ny toe-javatra.
Misy ny zava-misy mampihoro-koditra ao Brezila. Ao amin'ny fanjakan'i Mato Grosso do Sul, ohatra, olona indizeny 300 farafahakeliny no namoy ny ainy tamin'ny adi-tany taloha vao tsy ela akory izay. Mpitarika indizeny maro no niezaka nanaitra ny saina mikasika izay antsoin'izy ireo fa fandripahana mitranga ao amin'ny firenena, izay namonoan’ ireo andiana milisy ny olona indizeny. Fanampin'izany, kely na tsy misy mihitsy ny adihevitra mikasika izany. Guarani-Kaiowá, foko lohalaharana amin'ny famonoan-tena ao Brezila ny sasany tamin'ireo niharam-boina. Araka ny lahatsoratry ny New York Times, in-12 avo heny noho ny antonony ao amin'ny firenena ny famonoan-tena eo amin'ny foko.
Vazimba teratany manao fihetsiketsehana eo ivelan'ny Fitsarana Tampony ao Brezila. Sary: Wilson Dias/AgênciaBrasil/CC 3.0
Manerana ny firenena manontolo, izay misy fahasamihafana ara-paritra isaky ny fanjakana, mitolona mba hahazo ny tany nankatoavina sy voafaritra azy ireo ny indizeny ao Brezila. Teo am-piandrasana izany, maro no tsy maintsy nonina teny amin'ny sisin'ny arabe na teny an-dalambe. Ny governemantan'ny filoha Dilma Roussef no manana taha ambony indrindra tamin'ny famaritana tany tao anatin'ny 30 taona.
Toa hifidy fanitsiana lalàm-panorenana manova ny fomba fanaovana famaritana tany ny Kongresy. Raha lany, hamindra ny fanapahan-kevitra farany momba ny famaritana ny tany sy ny fananan'ny indizeny avy amin'ny ‘ny fahefana mpanatanteraka any amin'ny fahefana mpanao lalàna ny PEC 215(Tolo-kevitra Fanitsiana Lalàmpanorenana). Raha ny marina kokoa, hametraka ny teny farany momba ny tany indizeny nentim-paharazany ho eo am-pelatanan'ny Kongresy sy ny mpamboly mpandresy lahatra (lobby) – ny ruralistas (mpandala ny ambanivohitra).
Mandritra izany, nanampy ny adi-tany ny resaka solika. Tamin'ny volana Novambra, tahirin-tsolitany tao Florianópolis no notafihan'ny tompony teo aloha tsy nanaiky ny vola naloa hamerenana ny tany any amin'ny olona teratany. Iray volana mialoha ny fanafihana, namoaka didy manohitra ity lehilahy ity ny mpitsara, milaza fa fantany tsara fa tany indizeny ireo tany ireo tamin'izy nividy voalohany ny fananana. Efa nilaza ny lehiben'ny foko Eunice Antunes, fantatra koa hoe Kerexu Yxapyry fa efa nahazo fandrahonana ho faty sy hotoriana izy talohan'ny fanafihana saingy tsy nisy ny fepetra noraisina.
Ny Famonoana an'i Vitor
Roa andro taorian'ny famonoana an'i Vitor, nitolo-batana tany amin'ny polisy ny lehilahy iray voarohirohy, 23 taona mba hiaiky fa izy no namono ilay zazakely. Nanapa-kevitra hitolo-batana izy satria natahotra ny ainy, saingy tsy nilaza ny antony izy. Nilaza ny sasany fa mety manana olana ara-tsaina izy.
Saingy raha tsy misy ambara betsaka momba ny mpamono azy, milaza betsaka momba ny fomba fitondran’ i Brezila ny mponiny teratany ny fahafatesan'i Vitor. Hoy i Eliane Brum:
Mainty hoditra, olona mahantra ary olona teratany ny ankamaroan'ireo izay mbola matin'ny vono olona ao Brezila. […] Mitanjaka isika. Ary mahatsiravina ny endrika andraisana antsika. Mihoson-drà ny vatana kelin'i Vitor ary vitsy ireo nitomany azy.